C-nyeredzi - Shanghai Yenyika Dzepasi Pose Kuratidzira Kwemhinduro uye Maitiro Zvese nezve Retail, nhengo yeEuroShop Trade fairs mhuri, yakakura nekukurumidza kubva kutanga kwayo muna 2015 uye yakave yakakurisa chikuva muindasitiri yekutengesa muChina. C-nyeredzi 2020 yaive succ ...
ne admin pane 20-02-16
Tiri kusundidzira maviri mhando yeNew chigadzirwa - Dynamic Curtain RGB LED Strip & Dynamic RGB LED Module. Chivako chega chega chinotaura nyaya, uye ndizvo zvinoitawo mukati. Izvo zviri nyore-kuvaka-zvine simba lightbox LED mapaneru kubva kuHYM Mwenje inogona kukubatsira iwe kuumba iyo nyaya. Iyo modular dhizaini mak ...
Iyi ndiyo Couleur Lighting yatora chikamu muEuroShop, iyo 2020 edition yechitoro chakakosha chiitiko chakapa mukana weCouleur Lighting kuratidza shanduko yayo nehunyanzvi. Tinoda kutenda munhu wese akashanyira dumba redu kuEuroshop muDusseldo ...